Tag: econsultancy | Martech Zone
Talata, Jolay 5, 2016 David McIninch
Nandritra ny revolisiona indostrialy, ny olombelona dia niasa toy ny ampahany tao anaty masinina, napetraka teny amin'ny làlan'ny fivoriambe, nanandrana nanao ny asany araka izay azo atao mekanika. Rehefa miditra amin'ilay antsoina ankehitriny hoe "Revolisiona indostrialy faha-4" isika dia nanaiky fa ny masinina dia tsara lavitra noho ny mekanika noho ny olombelona. Ao amin'ny tontolon'ny dokam-barotra amin'ny fikarohana, izay mandanjalanja ny fotoanan'ny mpitantana ny fampielezan-kevitra eo anelanelan'ny fananganana fanentanana, ary ny fitantanana sy ny fanavaozana azy ireo amin'ny mekanika.
Ny fiakaran'ny varotra sy dokam-barotra miorina amin'ny olona
Alatsinainy Aprily 25, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ao amin'ny whitepaper momba ny Marketing ho an'ny daholobe, Atlas dia manome antontan'isa mahaliana momba ny varotra sy ny doka ataon'ny olona. Raha mandany fotoana bebe kokoa amin'ny finday amin'ny ankapobeny, ny 25% ny olona mampiasa fitaovana 3 na mihoatra isan'andro, ary 40% ny olona mifamadika fitaovana hamita ny hetsika Inona no atao hoe Marketing miorina amin'ny olona? Ny rindranasa sy ny sehatra sasany dia manome ny mpanao dokam-barotra fahaizana mampakatra ny lisitry ny lisitry ny mpanjifa eo amin'ny roa tonta. Azo alefa sy ampifanarahina amin'ny mpampiasa ny lisitra
Ny votoaty hita maso dia mitarika fahatakarana, fifampiraharahana ary fiovam-po amin'ny media sosialy
Zoma, Jolay 24, 2015 Zoma, Jolay 24, 2015 Douglas Karr
Efa nivazavaza ve isika momba ny atiny hita maso? Heveriko fa tsy izany. Izahay dia efa nizara infografika roa momba ny fitantarana an-tsary sy ny fomba fahombiazan'ny fampiasana karazana karazana atiny hita maso. Nohazavaiko tamin'ny mpivarotra iray eto an-toerana ity fomba ity tamin'ity herinandro ity ary tena nanana fotoan-tsarotra tokoa izy ireo nino ny fiantraikan'ny atiny hita maso isan'andro zaraina amin'ny Internet afaka manampy ny orinasany. Raha teo aho dia naka 10
Ny fiantraikan'ny marketing amin'ny antoko voalohany sy ny angona fahatelo
Talata, Jona 23, 2015 Douglas Karr
Na eo aza ny fiankinan-doha manan-tantara amin'ny data an'ny antoko fahatelo, dia nisy fanadihadiana vaovao navoakan'ny Econsultancy sy Signal nanambara ny fiovan'ny indostria. Ny fandinihana dia nahitana fa ny 81% an'ny mpivarotra dia mitatitra fa mahazo ROI avo indrindra amin'ny fandraisana an-tanana ny angon-drakitra rehefa mampiasa angona antokony voalohany (raha ampitahaina amin'ny 71% ny mitovy taona aminy) izay 61% fotsiny no mitanisa ny angon-drakitra fahatelo. Ity fiovana ity dia antenaina hihalalina, miaraka amin'ny 82% amin'ireo mpivarotra rehetra nanadihady ny tetika hampiakarana ny fisondrotan'izy ireo
Toy ny paoma sy fromazy, mailaka ary marketing amin'ny haino aman-jery sosialy
Talata, Oktobra 28, 2014 Alahady Oktobra 26, 2014 Douglas Karr
Tiako io teny nalaina avy tamin'i Tamsin Fox-Davies, Senior Development Manager ao amin'ny Constant Contact io, izay mamaritra ny fifandraisana misy eo amin'ny media sosialy sy ny marketing amin'ny mailaka: Ny media sosialy sy ny marketing amin'ny mailaka dia toy ny fromazy sy paoma. Tsy mieritreritra ny hiaraka ny olona fa tena mpiara-miasa lavorary. Ny media sosialy dia manampy amin'ny fanitarana ny tratry ny fampielezana mailakao ary afaka manangana ny mailakao. Mandritra izany fotoana izany, ny doka mailaka tsara dia hampitombo ny fifandraisanao amin'ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery sosialy, ary hiova